Wasiir Dubbe “Imaaraadku wuxuu rabaa in Soomaaliya ay noqoto sida Liibiya iyo Yemen” - Awdinle Online
Home News Wasiir Dubbe “Imaaraadku wuxuu rabaa in Soomaaliya ay noqoto sida Liibiya iyo...
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay dalka Imaaraatka Carabta in uu wado isku dayo uu dalka ka abuurayo qalalaase.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo ayaa sheegay in warqad kasoo baxday Imaaraatka ay ka muuqato in aysan aqoonsaneyn dowladnimada Soomaaliya.
“Warqadda Imaaraatka waxaa ka muuqdaa in aysan aqoonsaneyn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkiriyaan…warqadda waxaa ka muuqdaa in Imaaraatka uu ka rabo Soomaaliya sida Yemen iyo Liibiya oo kale oo ay ka abuurto fowdo iyo barakac”
Shaley ayay aheyd markii dowladda Imaaraatka ay walaac ka muujisay qalaalisihii dhawaan ka dhacay Muqdisho.
“Wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah waxay ugu baaqeysaa dowladda kumeel gaarka ah ee iyo dhammaan dhinacyada inay is xakameeyaan si loo gaaro higsiga Soomaaliya ah in la helo nabadda iyo xasilooni buuxda” ayaa lagu yiri warqadda kasoo baxday Imaaraatka.
Previous articleCabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo weerar afka ah ku qaaday Farmaajo
Next articleDuulimaadyada Caalamiga ah oo dib uga bilaawday Garoonka Aadan-Cadde